အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်မှုကို ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ? - Wall Street English
အွန်လိုင်းကနေ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူတာက လွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ အွန်လိုင်းကချိတ်ဆက်ပြီး ငွေပေးချေပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း စတင်နိုင်ပါပြီ။ ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာ လေ့လာနိုင်သလို တစ်နေ့တာအတွက် လုံလောက်သွားပြီလို့ ယူဆတဲ့အခါမှာလည်း မိမိစိတ်ကြိုက် ရပ်နားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုး လွယ်ကူမှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာက အခက်အခဲလေးတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ သင်တယ်ဆိုပေမယ့် မိမိရဲ့ ငွေကြေး၊ အချိန်နဲ့ အင်အားတွေကို တက်ရောက်သင်ယူတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားမှု (သင်ရိုး) အပေါ်မှာ စိုက်ထုတ်ထားရတာဖြစ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို သိရှိနိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
လက်တွေ့မှာ အောင်မြင်နေပြီး နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဆုတံဆိပ်တွေပါရရှိထားတဲ့ Wall Street English ရဲ့ သင်ကြားမှု နည်းစနစ်နဲ့ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို မည်သည့်အချိန်မှာမဆို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အနီးကပ် ဂရုစိုက်မှုကိုပါ ရယူနိုင်မှာပါ။
လွယ်ကူရိုးရှင်းသော အဆင့်များဖြင့် သင်ကြားပေးခြင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ အဆင့်လေးတွေနဲ့ ပိုင်းခြားထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအဆင့်လေးတွေမှာလည်း သူ့အဆင့်အလိုက် အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာလို့ရမယ့် ပန်းတိုင်လေးတွေ ထားရှိပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ Level ဘယ်လောက်ကို ပြီးပြီးဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်လို မေးခွန်းတွေ မေးတတ်သွားမယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အယူအဆတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းစွာ ဆွေးနွေးနိုင်လာမယ်၊ စသဖြင့် သူ့အဆင့်အလိုက် ပန်းတိုင်လေးတွေရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်အောင်မြင်သွားတဲ့ level အလိုက် မိမိရဲ့ English Skill တိုးတက်မှုကို ဆန်းစစ်သိရှိနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပြူတာစနစ်များနဲ့ရော လူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ပါ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Online Lesson တွေ၊ Digital Workbook တွေမှာ သတ်မှတ် Level အလိုက် အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှုကို စစ်ဆေးပေးတဲ့ စနစ်တွေ ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းတွေကို ဖြေဆိုနိုင်မှု ရှိမရှိက သင့်ရဲ့ တိုးတက်မှုကို လက်တွေ့ ဖော်ပြနေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် သင်ခန်းစာတွေ ကျေညက်မှု ရှိမရှိ၊ ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် လုံလောက်အောင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု ရှိမရှိကိုလည်း အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ လက်မှတ်ရ (certified) Native Speaker ဆရာတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရပါသေးတယ်။ Native Speaker ဆရာတွေက သင့်ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမှုအတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ၊ အကူအညီတွေကိုလည်း ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာစနစ်နဲ့ရော ဆရာတွေနဲ့ပါ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးပြီးသွားရင်တော့ သင့်ရဲ့ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို ခိုင်မာစွာ သိရှိနိုင်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်သာ တိုးတက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း
Unit တစ်ခု Level တစ်ခုကနေ နောက် Unit တစ်ခု Level တစ်ခုကို တက်ဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုကိုပဲ အခြေခံပါတယ်။ လေ့လာသင်ယူထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို လက်တွေ့ ဘဝ အခြေအနေတွေမှာ အသုံးချနိုင်စွမ်း ရှိမရှိကို ဆရာတွေနဲ့ လက်တွေ့ စစ်ဆေးပြီး သင့်အနေနဲ့ နောက် Unit နဲ့ Level အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း သေချာမှသာ သင်ခန်းစာတွေကို ရှေ့ဆက်ရမှာပါ။ Native Speaker ဆရာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံသင်ယူရမယ့် Class Size သေးတဲ့ (လူဦးရေ ၄ ဦးအထိသာ ကန့်သတ်ထားတဲ့) အတန်းတွေမှာလည်း သင်နဲ့ Unit တူ Level တူ သင်တန်းသားတွေနဲ့သာ သင်ယူရမှာ ဖြစ်တာမို့ ကျွမ်းကျင်မှု level မတူညီဘဲ လိုက်လို့မမီတာ၊ စောင့်နေရတာတွေ မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ Native Speaker ဆရာနဲ့အတူ level တူသင်တန်းသားတွေက Real Life English ကို လက်တွေ့ သုံးနှုန်းပြောဆိုရင်း လက်တွေ့ တိုးတက်မှုကို မိမိကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတန်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဆရာက မိမိအနေနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်ဖို့ လုံလောက်အောင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု ရှိမရှိ feedback နဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုဟာ ဘဝအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တာမို့ ကောင်းမွန်စွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သလို ပေးရတဲ့ အချိန်နဲ့ ငွေကြေးအလိုက် သိသာထင်ရှားတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို ပြန်လည်ရရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ တတ်မြောက်မှု ပန်းတိုင်တွေအပေါ်ကို အခြေခံထားပြီး မိမိရဲ့ တိုးတက်မှုကို အမြဲမပြတ် သိရှိနေနိုင်တဲ့ Wall Street English ရဲ့ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ သင်ကြားမှုစနစ်က အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာလိုသူတိုင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။
(WSE International မှ How Can I Be Sure That I’m Making Progress? ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆို မှီးငြမ်းပါသည်)